Barnamijka Dhismaha Madaarka Borama Ee Pro Xasan Cali Cismaan Ma Mutadawacbaa Mise Waa Mansabku raadis | Lughaya.Com
Barnamijka Dhismaha Madaarka Borama Ee Pro Xasan Cali Cismaan Ma Mutadawacbaa Mise Waa Mansabku raadis
Added by Adal on February 3, 2018.
Dhawaan waxa aan warbaahinta ka daalacday maareeyihii hore ee hayada wadooyinka mudane Xasan Cali Cismaan oo ka warbixinaya barnaamij horemarineed oo xayndaab loogu samaynayo ama lagu dayrayo Madaarka Magaalada Borama. Arintaasi waxa ay igu dhalisay in aan faaladan ka diyaariyo.
Xasan Cali Osmaan waa midkamid ah aqoonyahanada gobolka Awdal waxaana lagu tiriyaa in uu yahay halabuur ka qaybqaata barnaamijyada horumarinta bulshada, waxa uu mudo badan ku noolaa wadamada khaliijka waxana laguxasuustaa in uu ka mid ahaa ragii hindisay in la sameeyo Jaamacad wakhti aanay Soomalidu hadalhayn Jaamacado, fikradaasina waxa ka dhalatay yagleelka jaamacad Camuud. Markii uu dalka yimid waxa uu maareeye ka noqday hurumarinta wadooyinka ee ASARDA. Iyada oo aad loogu amaano waxqabadkii dhismaha jidka iskuxidha Borama iyo Dila. Kaasi oo noqday jidkii ugu horeeyay ee Laami ah oo uu hirgaliyo bilawgiisa urur aan dawli ahayn in kasta oo markii danbe xukuumada Kulmiye ay jidkaasi dhamaystirtay . Kadib waxa ay xukuumada Kulmiye u magacawday maareeyaha hayada wadooyinka Somaliland waxaan uu ka qaybqaatay dhismahii jidka iskuxidha Burco iyo Ceerigaabo.
Markii hadaba xilkaasi laga qaaday waxa uu markiiba ka midnoqday xisbiga mucaaradka ah ee WADANI. Dhawaan waxa uu Xasan Cali Cismaan sheegayin uu xayndaab ku samayndoono madaarka magaalada Borama . Sida uu warbixintiisa ku sheegay waxa uu timaamay qaabka uu ku suurto galinayo hawshaa baaxada leh isaga oona sheegay in uu doonayo in uu bilaabo ururin ta qaadhaan uu ka dalbayo dadwaynaha.
Suaalaha hadaba la iswaydiinkaro ayaa waxa ay yihiin madaarka magaalada Borama waxa maamusha wasaarada duulista iyo hawada maadaama la ogyahay Xasan Cali Cismaan hada in uu yahay sarkaal ka tirsan xisbi mucaarad ah habka isaga iyo wasaaradaasiay u wada shaqayndoonaan muxuuyahay? Amaba horta fasax ama ruqsad miyuu ka haystaa xukuumada dhexe wali?
Jawaabta su aashan ayaa dadka qaar aaminsanyihiin in pro Xasan Cali uu yahay in tixgalin u ooman sidaadarteedna uu isagu is magacaabay oo aanu wax fasax ah ka haysan xukuumada.
Ujeedka ugu way nee uu talaabadan ka leeyahayna waxa ay tahay in uu u muujiyo xukuumada ama dadwaynaha in uu wali shaqaynayo oo uu bulshada kaalin waxku ool ah kaga jiro maadaama uu iswaayay baryahandanbe. Hadii fikradani ay saxtahay waxa ay u wanaagsantahay Xasan Cali xaga aqbalaada xukuumada iyo dadwaynahaba.
Ta labaad sida laga warqabo waxa xayndaabka madaarka Borama hore qandaraas logu siiyay in aydhisto shirkad dhisme oo laga leeyahay gobolka Awdal waxana ay halkaasi qaybtii hore oo hayad silig ay ka fulisay iyada oo hadana wajigii labaadna sugaysa in loo soo shubo lacagta.
Ololaha markaa Xasan Cali uu ugu jiro dhismaha xayndaabka Madaarku waxa uu abuurikaraa qas iyo isku dhac ka aloosma isaga iyo shirkadii waase hadiiba ay dawladu u ogolaato arintaasi
Sikastaba ha ahaatee waxa yana jirta in kalaqaybsanaan ay ka dhexjirto bulshada deegaanka uu kuyaalo Madaarka Boramakuwaasi oo dhawaana hadalo xanafleh hawada isku marinayay isla markaana Xasan Cali Cismaan ay qaybi isaga taageersan yihiin barnaamijkiisa kuwaasi oo ah beesha ama jufada uu ka soo jeedo ah waxana barnaamijkiisu uu sabab u yahay kalaqaybsanaanta bulshadaasi maadaama uu bilawgii beeshiisa uun uu la shiray.